Zidane oo si lama filaan ah uga Tagay shaqadii Real Madrid (Daawo Sawirada)..May 31.18 : Salaan Media
Dhacdo aysan cid rajo ka qabin, sheeko ay tahay inuu aamino qof la socday xaaladaha ugu dambeeya ee kubadda cagta ayaa xaqiiqo noqotay iyadoo Zinedine Zidane uu gabi ahaanba go’aansaday inuu isaga tago Real Madrid.
Zidane oo noqday macalinka kaliya ee ku guuleystay saddex jeer oo xiriir ah koobka UEFA CHampions League tan iyo markii magacaan loo bixiyay ayaa subaxnimadii arbacada aheyd gaaray go’aankaan isagoo ku wargaliyay Florentino Perez.
Sida uu ku dhawaaqay madaxweynaha kooxda Florentino Perez, ninka reer France isaga ayaa go’aansaday inuu isaga baxo garoonka Santiago Bernabeu maalmo kadib markii uu kooxda u qaaday koobkii1 3-aad ee Champions League
“Waan jeclahay kooxda, waan jeclahay madaxweynaha, wuxuu i siiyay fursad ka ciyaartoy ahaan iyo ka maamul ahaan aad baan ugu mahadinayaa” ayuu yiri Zidane oo ka hadlay shirka jaraa’id ee maanta.
“Balse waa inaan badalnaa” ayuu yiri Zizou.
Dhanka kale Florentino Perez wuxuu saxaafadda horteeda ka qiray inuusan jecleysan go’aanka uu gaaray Zidane balse ay aheyd go’aankiisii ugu dambeeyay.
« DAAWO:-UNICEF Oo Qalabka Nadaafada Caafimaadka ku Wareejisay Degaanka Gargaara Ee Degmada Lughaya April 31, 2018
Daawo Muqaal:Xoghaye Ku Xigeenka Warbaahinta Waddani UK Oo ka Hadlay Qorista Sooyaalka SNM Mataan M Omar..May 31.18 »